Airdrop ဆိုတာဘာလဲ iOS နဲ့ Mac ပေါ်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ရှာတွေ့သည်! | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Luis Padilla | | iOS 10, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
iPhone သုံးစွဲသူများသည်ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုအခြားစက်ပစ္စည်းများသို့မပို့နိုင်သည့်အချိန်များဖြစ်သည်။ AirDrop ဆိုတာဘာလဲ။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာပေးပို့နိုင်သည့် iOS နှင့် macOS ၏ဇာတိ function ကို အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော iOS မှ iOS, iOS, Mac သို့ Mac မှ Mac သို့အခြားပစ္စည်းများသို့ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AirDrop မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်၊ မလိုလားအပ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကန့်သတ်ချက်များအားမည်သို့မည်ပုံပြင်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝရှင်းပြခဲ့သည်။ သင် AirDrop နှင့်အတူမာစတာဖြစ်လိုပါသလား အတွင်းပိုင်း၌သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
1 AirDrop အလုပ်လုပ်ပုံ
2 အဘယ်အရာကို devices များထောက်ခံကြသည်
3 iOS တွင် AirDrop ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
4 MacOS မှာ AirDrop ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ
6 AirDrop သုံးပြီးဖိုင်များကိုဘယ်လိုပို့မလဲ
7 တစ် ဦး ကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့စနစ်
AirDrop သည် Bluetooth နှင့် WiFi ကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုတက်ကြွရန်လိုအပ်သည်။ WiFi ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် Bluetooth ကိုကိရိယာများကို detect လုပ်ရန်နှင့် connection ကိုတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သော bandwidth နှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ WiFi network ကိုချိတ်ဆက်ဖို့မလိုပါဘူး၊ connection နှစ်ခုမွာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားမှာဖြစ်ပြီး network ကြားမှာ network မရှိပါဘူး။
သင်ဤ AirDrop ကို activate လုပ်ထားသော်လည်းဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးသောဤလုပ်ဆောင်မှု mode သည်ခွင့်ပြုသည်၊ ကိရိယာများရှာဖွေခြင်းသည်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသောဘလူးတုသ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပိုမိုတိုးတက်လာသည့်အပြင်ဘက်ထရီပိုကုန်ကျသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
အဘယ်အရာကို devices များထောက်ခံကြသည်
ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန် Bluetooth နှင့် WiFi ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ပထမ ဦး စွာ iPad၊ iPhone, iPod Touch နှင့် Mac ကွန်ပျူတာများတွင်ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများရှိသဖြင့်လိုအပ်ချက်များမှာမမြင့်မားပါ။ သို့သော်အချို့သောစနစ်များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များသည်အချို့သောဟောင်းသောထုတ်ကုန်များကိုချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။.
iOS ကိရိယာများအတွက် -
iOS7သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
iPhone5သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
iPad4သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
iPad Mini ပထမမျိုးဆက်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
iPod Toch 5th Generation နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်
Mac ကွန်ပျူတာများအတွက်သင်ဟာအခြား Mac တစ်ခုသို့မဟုတ် iOS စက်သို့ပေးပို့နေလျှင်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်Macs သည် AirDrop ၏မတူညီသောဗားရှင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့ iOS ထုတ်ကုန်များသည်ပိုမိုခေတ်မီသောဗားရှင်းလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ Mac မှ Mac သို့သင်သွားလိုလျှင် -
MacBook Pro Late 2008 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း (MacBook Pro 17″ Late 2008 မှအပ)
MacBook Air Late 2010 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
MacBook Late 2008 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း (အဖြူ MacBook Late 2008 မှအပ)
iMac ၂၀၀၉ အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
Mac Mini Mid 2010 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်
၂၀၀၉ အစောပိုင်းက AirPort Extreme (သို့) ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းကဒ်ပါသော Mac Pro
အကယ်၍ iOS ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှ Mac သို့သင်အပြန်အလှန်ပို့လိုလျှင်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးသော AirDrop-လိုက်ဖက်တဲ့ iOS device နှင့်အောက်ပါတို့မှ Mac တစ်ခုကိုသင်လိုအပ်သည်။
OS X Yosemite သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသော 2012 ခုနှစ်မှနောက်မှမည်သည့်ကွန်ပျူတာမဆိုMac Pro Mid 2012 မှလွဲ၍
iOS တွင် AirDrop ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
AirDrop အလုပ်လုပ်ရန် Bluetooth နှင့် WiFi သက်သက်သာသာလိုအပ်သည်။ Control စင်တာကိုဖွင့်ပြီး AirDrop ခလုတ်ကိုသေချာအောင်စစ်ဆေးပြီး၊ reception ည့်ခံနေကြောင်းညွှန်ပြပါ။ သင်လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောပြင်ဆင်မှုမှာသင်မည်သူ့ကိုဖိုင်များပို့နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည် (သော AirDrop ကို disable လိမ့်မည်) ။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိမထားပါနှင့် Do Not Disturb mode ကိုအသုံးပြုပါက AirDrop သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။
သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအခြားသူထံမှအဆက်အသွယ်ဖြစ်စေ၊ မသိသောဖြစ်စေအခြားသူထံမှဖိုင်ပို့ခြင်းသည်သင်၏လက်ခံမှုကိုလိုအပ်သည် ကိရိယာကိုသော့ဖွင့်ခြင်း ၎င်းကိုလူတိုင်းအတွက် (သို့) သင်၏အဆက်အသွယ်များသို့သာဖွင့်ထားခြင်းကသူစိမ်းများသည်သင့်ကိုဖိုင်တစ်ခုပို့ပေးလိုသောအကြောင်းကြားစာကိုပင်အနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အရေးကြီးသည့်အရာမှာတစ်ခုတည်းသောအဆက်အသွယ်များရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏အစီအစဉ်တွင်သင့်အားဖိုင်ကိုပို့လိုသော iCloud အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောဖုန်းနံပါတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အီးမေးလ်တို့ပါ ၀ င်ကြောင်းသေချာစေရမည်။
MacOS မှာ AirDrop ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ
macOS အတွက်ပြင်ဆင်မှုသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ မည်သူသည်သင့်အားမည်သူပေးပို့မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် iOS ကဲ့သို့အခြေခံသည်။ AirDrop ကိုဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းရှိသည့် Finder တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအပိုင်းတွင် iOS (ဘယ်သူမှ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်လူတိုင်းသာ) ကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာများကိုပို့နိုင်သည့်အနီးအနားရှိကိရိယာများကိုတွေ့လိမ့်မည်၊
ကျွန်ုပ်တို့၌အရာရာကိုပြီးပြည့်စုံစွာစီစဉ်ထားပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ WiFi နှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုကိုသက်ဝင်စေကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်သဟဇာတဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်တစ်ခုပို့စေလိုသည်။ AirDrop လက်ခံမှုသည် "အလိုအလျောက်" ဖြစ်သော်လည်း AirDrop မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ share menu ကိုဖွင့်သူမည်သူမဆိုသင့်စက်ကိုကြည့်ရှုသင့်သည် သင်၏ privacy options သည်သင့်လျော်သရွေ့ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံလိုသူသည်မပေါ်သည့်အချိန်များရှိသည်။
အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင် file လက်ခံသူကိုမေးရမှာက Control Center ကို iOS မှာပြဖို့၊ screen အောက်ခြေကနေလျှောသွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ် MacOS နဲ့အတူ Finder ကိုဖွင့်ပြီး AirDrop အပိုင်းကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ဝဲဘက်ကော်လံ။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုရှယ်ယာဖန်သားပြင်တွင်တွေ့ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုမတွေ့သေးပါကဖိုင်ပေးပို့ခြင်းကိုအကန့်အသတ်ရှိလျှင်သို့မဟုတ် AirDrop ကိုပိတ်ထားပါက privacy options ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည် AirDrop နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် WiFi နှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုများကိုဖွင့်ထားကြောင်းနှင့်ကိရိယာများ (ပေးပို့သူနှင့်လက်ခံသူ) သည်ဘလူးတုမှတစ်ဆင့်သိရှိနိုင်လောက်အောင်နီးကပ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါကဖိုင်တစ်ခုကိုစတင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ ဘယ်လိုဖိုင်မျိုးကိုမျှဝေလို့ရမလဲ။ ဘယ်ကနေမျှဝေလို့ရမလဲ။ အဖြေမှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ ဤပေးပို့စနစ်နှင့်လိုက်ဖက်သောမည်သည့်ဖိုင်မဆိုနှင့်မျှဝေရန်ရွေးချယ်စရာကိုပံ့ပိုးသောမည်သည့် application မှမဆို။ ၎င်းသည်မူလ application ဖြစ်စရာမလိုပါ၊ Third-party applications များသည် AirDrop မှဖိုင်များကိုအပြည့်အဝပေးပို့နိုင်သည်။
ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေနိုင်သောဥပမာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ Apple Music သို့မဟုတ် Spotify စာရင်းများ၊ ၎င်း၏ iOS လျှောက်လွှာမှသတင်းစာ၊ Safari မှဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ iCloud Drive မှစာရွက်စာတမ်းများအားလုံး ... ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုသာရှိသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသောအကြောင်းအရာမရှိပါ။ Apple Music သီချင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သီချင်းဖိုင်မဟုတ်ပါ။ Dropbox သို့မဟုတ် Google Drive ကဲ့သို့သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်တွင်မပါရှိပါကသင်၏ iPhone ပေါ်ရှိမည်သည့်ရုပ်ရှင်နှင့်မဆိုအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖိုင်တစ်ခုပို့ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျနော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖိုင်ရွေး, မြှား (1) နှင့်အတူစတုရန်းအိုင်ကွန်များအတွက်လျှောက်လွှာကိုကြည့်ပါကနှိပ်ပြီးတော့ပုံမှန် iOS « Share » menu ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အပေါ်ဆုံးတွင် AirDrop တက်ကြွစွာရှိသည့်လက်ခံသူများကိုတွေ့ရလိမ့်မည် (သူတို့မပေါ်လာပါကယခင်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုညွှန်ပြသည့်နေရာတွင်ကြည့်ပါ)၊ လက်ခံသူ (2) ကိုရွေးပြီးဖိုင်ကိုပို့မည့်အချိန်ကိုစောင့်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud အကောင့်တူသောစက်တစ်ခုဖြစ်ပါကပေးပို့ခြင်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ အခြားအကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါကလက်ခံသူသည်လက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုရမည်။, သင်တို့အဘို့ကိုလည်း device ကိုသော့ဖွင့်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏စက်တွင်အတည်ပြုပါလိမ့်မည်။
Mac တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်ကြောင့်သိသာသောပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ AirDrop သည်ထိုသဟဇာတဖြစ်သော application များ၏ Share options များအတွင်းတွင်ရှိသည်Safari လိုပဲ။ iOS မှာလိုပဲကျနော်တို့ arrow arrow နဲ့ square icon ကိုရှာပြီး AirDrop ကိုရွေးပါ။
AirDrop ၀ င်းဒိုးတွင်ဖိုင်များကိုလက်ခံရရှိသူများပေါ်လာလိမ့်မည်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကမည်သူရည်ရွယ်သည်ကိုသာရွေးချယ်ပြီးဖိုင်ပို့ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ရမည်။
ထို option ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့် application မှမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် AirDrop ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ Finder ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ပြီးဘယ်ဘက်ကော်လံတွင် "AirDrop" ကိုရွေးချယ်ပါ။။ လက်ခံသောလက်ခံသူများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ မည်သည့် element ကိုမဆို၎င်း ၀ င်းဒိုးသို့ပို့ရန်၎င်းတို့ကိုဆွဲယူနိုင်လိမ့်မည်။
လည်း Finder မှဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးနိုင်သည်။ ညာဘက်ခလုပ်ဖြင့်«ဝေငှခြင်း> AirDrop »ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။ နှင့်လက်ခံမည့်သူအားရွေးချယ်ရန်ပြတင်းပေါက်သည်ပထမဥပမာတွင်ကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။
တစ် ဦး ကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့စနစ်
WhatsApp (သို့) အီးမေးလ်ကဲ့သို့သောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ သင်နှင့်အနီးရှိပုဂ္ဂိုလ်အားသင်ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမျှဝေခြင်းသည်သေချာသည်။ ဒေတာသုံးစွဲမှုအပြင်သင်ဤဖိုင်များသည် compressed ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းကိုသင်သိသင့်သည်။ ၎င်းသည်ပေးပို့ရန်အချိန်အကြာကြီးပေးနိုင်သည့်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ AirDrop ဟာစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းကိုသင်မည်သည့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် Mac အသုံးပြုသူနှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးမပြုဘဲအရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။အခြားသူတစ် ဦး ဦး အားထိုဖိုင်များကိုမျှဝေခွင့်ပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 10 » AirDrop ဆိုတာဘာလဲ။
ဝါကျမပြီးမချင်း Apple သည် Qualcomm သို့ငွေပေးချေမှုကိုရပ်လိုက်သည်